Noocyada Daawashada Raaxada - Dharka Ragga ee leh Qaabka | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Dhameystirka, fashion
Saacadaha silsiladaha silsiladaha ragga waxay ku sii wadaan inay dejiyaan isbeddello. Hub badan ayaa raba inay matalaan dhammaystirkan sida gabalkaas oo ku habboon wuxuuna muujiyaa shakhsiyadda qofka, maahan oo keliya qayb waxtar leh, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay qaab, dabeecad waxaana lagu sameeyaa dhadhan fiican.
Dhammaan naqshadeeyayaasha ayaa sharad sababtoo ah qalabka waa qaybaha iyo kaabayaasha wax ka beddela taasna waxaa badanaa lagu arkaa saacadaha iyo kabaha. Waxaa jira noocyo iyo shirkadaha ilaalinta taas oo taariikh ka dhigtay teknolojiyadooda iyo moodeelladooda. Kama baxaan qaab-dhismeedka xitaa qaar ka mid ah fasalada, laakiin qaar ayaa naftooda uga badiyay sameynta qaab aan caadi aheyn casri ah oo hadda jira.
1 Noocyada daawashada raaxada
Shaki la'aan mudaaharaadka aan hoos ku sameyno Waa qalab gaar ah iyo qaybo, oo ah noocyo aad u casri ah oo gaar loo leeyahay oo sameeya moodello sax ah iyo sharaf ugu dambeysa oo leh dammaanad qaadkooda oo dhan. Iyagu waa noocyada ugu fiican ee loogu talagalay helitaanka macaamiisha mustaqbalka iyo dejinta isbeddello badan:
Waa sumad Swiss ah oo la abuuray 1839 oo ka yimid Polish: Chapek (waardiye) iyo Patek (ganacsade), halkaasoo markii dambe Philippe uu noqday ilaaliyaha ugu weyn. Khadkeeda qadiimiga ah ee xarrago leh ayaa caan ku ahaa boqortooyada Yurub sannado iyo iyada farsamo adag oo casri ah.
Patek Philippe Iyagu waxay ahaayeen hormoodkii bilaabay saacadda saacadda mana khaldamin, waxay sidoo kale kudarsadeen aragtidooda calaamadaha shanta daqiiqo ee soo noqnoqda iyo xitaa waxay ku dhameystireen inta lagu gudajiray isbedelkeeda taariikheed weligeed ah. Noocyadeeda ugu fiican: Calatrava, Aquanaut, Nautilus ama Waqtiga Adduunka.
Waa summad kale oo Swiss ah oo ka mid ah kuwa ugu saameynta badan adduunka ee saacad-sameynta. mahadsanidiin shaqadiisa aan fiicnayn, nashqadaha raaxo iyo sumcad weyn. Omega wuu ogyahay sida loo iskiis isu taago waxaana lagu abaalmariyay shaqadiisa, tan iyo markii ay u dooratay NASA inay tahay saacadda kaliya ee awood u yeeshay inuu adkeysto dhammaan tijaabooyinka kuleylka, gariir, shoog, faaruq ...
Marka laga reebo ku dar saacaddaada saacadaha shaqada wuxuu abuuray Omega Speedmaster dhamaan faa iidooyinkaas iyo tijaabooyinkaas oo uu ku qaaday curcurka Edwin "Buzz" Aldrin inta lagu gudajiray talaabadiisii ​​ugu horaysay ee cirka. Tani waa qeyb ka mid ah taariikhdeeda, laakiin waxay sii waday hal-abuurka inta ka hartay taageerayaasheeda waana taas sababta ay u qaadeen ciidamadii Ingiriiska 1917 iyo kii badda ee Mareykanka ee 1918.
Waa astaanta heer sare, midka maskaxda ku soo dhaca marka aan ka hadlayno saacadaha raaxada. Mana ahan wax ka yar, tan iyo ayaa la abaal mariyay waqtiyo aan tiro lahayn naqshadeeda iyo shaqadeeda. Waxay leedahay asal ahaan Ingiriiska waana sumadda soosaarta saacadaha ugu raaxada badan.
Ka mid ah uruurinta ugu caansan waxaan haynaa Yacht-Master, Sky-Dweller, GMT Master II, Datejust, Daytona, Submariner ama Day-Date. Waxay u taagan tahay wax soo saarkeeda saxda ah waana taas sababta ay u heshay shahaadada taariikhda, taariikhda ugu horreysa. Waxa kale oo ay ahayd saacaddii ugu horreysay ee biyaha aan biyaha xidhin. abuurista Oyster sanadkii 1926, isagoo jabiyay rikoorkii 100 mitir.
Ururinta kale ee saacadaha Switzerland ee ku dhashay gacanta Antoine LeCoultre sanadkii 1833 aqoon isweydaarsigiisii ​​daawashada ee Le Sentier. Tobanaan sano ka dib, Soosaarka Jaeger-LeCoultre, waa horlogerie aad u xun Waxay u taagan tahay hal-abuurkeeda iyo awooddeeda farsamo ee weyn.
Waxay u taagan tahay sameynta wax ka badan 400 shatiyada oo waxay abuurtay in kabadan 1.200 calibers, oo leh moodooyin taariikhi ah gaar ahaanna uu caan "Reverso" sanadkii 1931, taas oo ilaa maanta ku jirta warshada. Waa nashqad qaabeynaysa tayada samaynta kiiska oo salka saacaddu isku rogto.
Saacadahaaga raaxada waxay ku guuleysteen inay horumariyaan oo ay naftooda meel dhigaan ka mid ah kuwa ugu caansan iyo xitaa ka dib markii la soo saaray sumcadda caanka ah ee Rólex. Astaamihiisa waxaa lagu aasaasay magaalada Paris sanadkii 1847, qaabkiisuna wuxuu la qabsaday astaamo u gaar ah taas oo ka dhigaysa inay cidna sasabto. Hal-abuurnimadeeda iyo nashqadeynteedu way muuqdaan matalaadda tirooyinkeeda Roomaanka iyo tiknoolajiyaddeeda aan waligeed dhicin, oo ah mid ka mid ah qamaarrada waaweyn.
Sumadda saacaddan ayaa ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, waxaa abuuray 1755 Jean-Marc Vacheron oo ku yaal Geneva. Waa saacado ka dhigay si kaamil ah oo sax ah, iyada oo aan la dayacin qaababkeeda soo jireenka ah, oo leh shakhsiyad iyo qaab weyn. Shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah raajada laba-geesoodka ah, jadwalkeeda badan, digniinta, saacadaha adduunka ama aagga waqtiga labaad.
Naqshadihiisa waxaa ka mid ah uruurinta qaarkood sida Taariikhda, Dibada, Dhaqanka, Patrimony, Malte iyo Metiers d'Art. Yaanan ilaawin inay dad badan oo caan ah ku soo jiiday waxqabadkeeda iyo naqshadaynteeda, oo ay ku jiraan Harry Truman iyo Napoleon Bonaparte.
Waa saacado wata nashqado waaweyn iyo noocyada caanka ah ee adduunka oo dhan. Iyagu waa moodooyin lagu heli karo qiimo aad u sarreeya, oo aan ku habboonayn ama la awoodi karin jeeb kasta, laakiin shaki la’aan iibkoodu si isdaba joog ah ayuu u kordhay sanadihii u dambeeyay. Tani waa kiiska Rolex kaas oo gaadhay illaa 5.000 milyan oo yuuro 2019 ama Omega oo leh 2.335 milyan oo yuuro. Noocyada kale sida Richard Mille waxay heleen 900 oo milyan mana ahan wax ka yar, maadaama qaar ka mid ah goobahooda ay gaarayaan celcelis ahaan 180.000 oo euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Noocyada daawashada raaxada
Caanbaxyo timo dhaadheer leh